Leaveareply	Thai-Myanmar နယ်စပ်ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ်မျဉ်းပေါ်မှာကျနော်ရပ်နေပါတယ် နောက်ကိုခြေတလှမ်းဆုတ်ရင် မြန်မာမြေပဲ့ ကျနော့်နောက်မှာမြင်နေရတာက မြန်မာပိုင်နက် ဘုရားသုံးဆူမြို့ပါ ထိုင်းဖက်ခြမ်းနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် အလံတိုင်တခုပဲမြင့်ပြီး ကျန်တာအကုန်နိမ့်ပါတယ်။
ကျနော့်ညာဖက်ခြမ်းမှာက ထိုင်းလဝကဂိတ်ရုံးလေးတည်ရှိပြီး ထိုင်းတွေ Border Pass လုပ်ပြီးမြန်မာပြည်ဖက်ကိုဝင်နေကြတာတွေ့ပါတယ်။ အာ့နဲ့ပြောရအုံးမယ် အဲလိုထိုင်းတွေဝင်နေတော့ ကိုယ်လည်းသူတို့နောက်က တန်းစီပြီးဝင်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လို့ ဘဒ်ပချာချွန်(ထိုင်းမှတ်ပုံတင်)ဆိုပြီးတောင်းတော့ မြန်မာပတ်စပို့ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထိုင်းလဝကကမျက်ကလူးဆန်ပြာဖြစ်သွားပြီး…ဟာ!! ဖမာ့ပဲ့..သွားလို့မရဘူး..ခွန်ထိုင်းပဲ့သွားလို့ရတယ် မင်းလာရာလမ်းကအခုပြန်လှည့် ပိုင်း…ပိုင်း..ဆိုပြီးနှင်လွှတ်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း တော်တော်ကြောင်သွားပါတယ် ဗမာပြည်ထဲကို ဗမာဝင်လို့မရဘူး ခွန်ထိုင်းပဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့။
လမ်းမှာစဉ်းစားမိတယ်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာ ဘယ်လိုအခြေနေပဲ့ဖြစ်နေပစေ သူတို့ထိုင်းတွေ အချင်းချင်းကူညီတာပဲရှိတယ်။ ပျော့ကွက်ရှာပြီးမရစ်ကြမလုပ်စားကြဘူး။ မြန်မာအာဏာပိုင်ဆိုသူတွေ နိုင်ငံဝန်ထမ်း ဆိုသူတွေကတော့ အမြဲလိုလို အရပ်သားပြည်သူဆို အားနည်းချက်ရှာ ရစ်မယ် ညှစ်မယ် ရှာစားဖို့ပဲ အာရုံစိုက်နေကြတယ်။ ရှက်ဖို့ကောင်းတာက ဒီလုပ်ရပ်ကို ထိုင်းတွေတောင်သိနေပြီ….ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါကျမှပဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်း အာဏာပိုင်တွေ ပြည်သူကိုကူညီတဲ့ခေတ်ရောက်ပါ့မလဲ..???
This entry was posted in Artical, မြန်မာသတင်း and tagged 2014, Article, ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်, ရဲတွေရဲ့ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်, ရွှေတြိဂံ, ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း, မြန်မာသတင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း, Blogger Shwe Htoo, Border Trade, Burma, Ko Shwe Htoo, Myanmar, Myanmar Passport Holder, Myanmar People, Passport, ShweHtoo's blog, Thai, Thai Myanmar Border on September 2, 2014 by koshwehtoo.	Post navigation